ChiGerman Modalverbler ChiGerman Modal Zviratidzo, zveGerman Zviratidzo
Modal phraseler, pamwe chete nezvinoreva madimikira avanoshandisa kushandira hunhu hweshanduko, Modal phrasel muTurkey maitiro emamaki kana enzi ayo anozivisa kupokana anoshandiswa. rasa modal phrase zvinoenderana nenyaya.
können e kuziva (kugona kuita)
bilmek. kuziva (isu tinoshandisa kana tichiita zviitwa zvakarambidzwa, pane zvine ruremekedzo kesi)
mussen… ..- anofanira, -ini (hapana chisungo chekuita chinhu)
(anofanira kuzivisa kukosha, mairairo anoshandiswa muchiremera, mabasa uye mabasa.)
mhunga …… chikumbiro (pane chirongwa, chinangwa uye chinangwa) (pane chokwadi)
mögen olma ..da kuita chimwe chinhu.
Ich kann gut singen (Ndinogona kuimba rwiyo rwakanaka)
Dürfen Sie zu uns kommen (unogona kuuya kwatiri here?)
(Tinofanira kuzadza mafomu akawanda)
(Unofanira kuenda kuchikoro mangwana)
Ndiri kuda kuronga ramangwana rangu.
Ich mag dich (ndinokuda)
Germany modalverbenari modalverb
Bata mehmet zvakananga anodaro 10 apfuura
Mienzaniso ine zvikanganiso
1 ) Dürfen Sie mit uns kommen?(Munokwanisa here kuuya kwatiri?) –>Sezvineiwo –> “Dürfen Sie zu uns kommen”, ngano iripo inopa imwe chirevo kuzwi.
2 ) Ich will für meine Zukunft palanen -> not palanen -> Inofanirwa kunge iri planen,
3) Ich mag von dir (Ndinokuda) - > nemazvo -> ich mag dich
Ndatenda nekuda kwako kwakakosha mhinduro.
Nyaya yacho yakatumirwa nenhengo yedu uye zvakasikwa kuti zvimwe zvikanganiso zvinowanikwa.
Iko kukanganisa kwakawanikwa kwakagadziriswa nesu.
ari modalverb anodaro 9 apfuura
Ndatenda kune weGerman modalverben
jeri modal verbler anodaro 9 apfuura
george modal phraseler
Germany modal verben anodaro 9 apfuura
esra anodaro 4 zuva rapfuura